ဗေဒင် – Thazin Media
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း (၈-၉-၂၀၁၉ မှ ၁၄-၉-၂၀၁၉ ထိ)
Kwee Zaw September 8, 201900
၈-၉-၂၀၁၉ မှ ၁၄-၉-၂၀၁၉ ထိ တစ်ပတ်တာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်းများ ဗေဒင် ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ပညာအတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်တွင် (၇ ) ရက် သားသမီးများ အတွက် ဟောစာတမ်း များကို ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။ တနဂၤေႏြ တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ကြာသာပတေး သောကြာ စေန…
စက်တင်ဘာ ၅ ရက်မှ ၁၁ ရက်ထိ တစ်ပတ်စာ တဲရော့ဟောစာတမ်း
Kwee Zaw September 7, 201900
၇ ရက်သားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက် တစ်ပတ်စာတဲရော့ဟောစာတမ်း စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့မှ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ၇ ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ တဲရော့ ဟောစာတမ်း လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အဆင်ပြေ အောင်မြင်ကြပါစေဗျာ။ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် တနင်္လာသားသမီးများအတွက် အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ကြာသာပတေးသားသမီးများအတွက် သောကြာသားသမီးများအတွက် စနေသားသမီးများအတွက် ဆရာသာထက်ဆန်း Unicode Version ၇ ရက်သားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက် တစ်ပတ်စာတဲရော့ဟောစာတမ်း စက်တင်ဘာ…
အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့အကျင့်စရိုက်များနဲ့ မွေးရာပါအားသာချက်များအကြောင်း
Thazin Media September 4, 201900
အင်္ဂါနေ့ဟာ ရက်သတ္တပတ်ရဲ့ သုံးရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့ မားစ်ဂြိုဟ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ ရှိပါတယ်။ စစ်သည်တော်ဝိဉာဉ်လို့ပြောလို့ရပြီး ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကြုံလာသမျှကို တိုက်ခိုက်ကာ အမြဲဦးဆောင်နေရတဲ့သူတွေအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ အင်္ဂါသား၊သမီးတွေဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ အတိုက်အခိုက်တွေကို လုံးဝဂရုမစိုက်ဘဲ အမြဲတမ်း ဖြတ်ကျော်နိုင်တဲ့သူတွေပါ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီအရာတွေက သူတို့ဘဝကို ပိုအဓိပ္ပါယ်ရှိစေတယ်လို့ ခံယူထားကြတာပါ။ ဘဝရဲ့ပြဿနာတွေကို နည်းလမ်းတစ်မျိုးနဲ့ အဆင်မပြေရင် နောက်တစ်မျိုးနဲ့ ချက်ချင်းဖြေရှင်းတတ်ကြသူတွေပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိကြပြီး ဒေါသကို…
စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှ ၇ ရက်နေ့ထိ ဟောစာတမ်း
မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလ (၁)ရက်မှ ၊ (၇)ရက်အတွင်း ဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် အကျွန်ုပ်၏ ဣဌသဘောဆောင်သည့် ကောင်းသောဟောချက်များ မှန်ကန်၍ ၊ အနိဌသဘောဆောင်သည့် မကောင်းသောဟောချက်များ တက်တက်စင်အောင် လွဲမှားပါစေသတည်း။ မှုံမှိုင်းအုံ့ဆိုင်းနေသော မိုးသားတိမ်လိပ်များ ၊ မိုးစက်မိုးပေါက်များများကြောင့် ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ်ရာကောင်းလှသော…
၇ရက်သားသမီးများ အတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း
သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း… ၇ရက်သားသမီးများ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ပြီး လိုရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ. တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် တနင်္လာသားသမီးများအတွက် အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ကြာသာပတေးသားသမီးများအတွက် သောကြာသားသမီးများအတွက် စနေသားသမီးများအတွက် ဆရာဇင်ယော်နီ Unicode Version သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ထိ…
Kwee Zaw August 23, 201900
သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်မှ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း… ၇ရက်သားသမီးများ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ပြီး လိုရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ. တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် တနင်္လာသားသမီးများအတွက် အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် ကြာသာပတေးသားသမီးများအတွက် သောကြာသားသမီးများအတွက် စနေသားသမီးများအတွက် ဆရာဇင်ယော်နီ Unicode Version သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်မှ သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ထိ…
Thazin Media August 19, 201900
Kwee Zaw August 15, 201900
Kwee Zaw August 12, 201900
Thazin Media August 3, 201900